परिवारका सबै सदस्य सरकारी जागिरे ! दाजु बहिनी नै सचिव - सुदूरखबर डटकम
परिवारका सबै सदस्य सरकारी जागिरे ! दाजु बहिनी नै सचिव
‘एउटै परिवारबाट सचिव बन्दा कस्तो लाग्दो रहेछ?’ हामीले दुवैलाई एकै प्रश्न सोध्यौं।
महेन्द्रले पहिलो जवाफ दिए, ‘खुसी हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन। हामीले सचिव हुने पहिलो दाजु-बहिनीका रूपमा आफ्नो नाम लेखाएका छौं।’
उनले अगाडि भने, ‘छोरीबुहारीलाई पढायो भने उनीहरूले पनि गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ।’
‘छोराछोरीलाई एसएलसीसम्म जसरी पनि पास गराउने मेरो बाबाको लक्ष्य थियो। तेह्रथुमदेखि मोरङ झरेर हामीलाई दुःखपूर्वक पढाउनुभयो,’ देवकुमारीले भनिन्, ‘एसएलसी पास गरेपछि पनि गाउँमै खेतीपाती गराएर अल्झाउनुभएन। बरू छोराहरूसँगै छोरीलाई पनि काठमाडौं पढ्न पठाउनुभयो।’
‘म आमाबाबालाई भेट्न गएँ। बाबाले अंगालो हाल्नुभयो। आमाले पनि अंगालो हालेर रुनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘म आमाबाबाको छेउमा बसिरहेँ। केही बोलिनँ। उहाँहरूको खुसीका आँशुका अगाडि मैले बोल्ने शब्द पनि केही थिएन।’
‘दाजु तेह्रथुममा मामाघर बसेर पढ्नुभयो,’ देवकुमारीले भनिन्, ‘हामी मोरङमा पढेको। मेरो त दाजुसँग राम्ररी भेट पनि त्यही बेला भएको हो।’
‘दाजुसँगै बसेकाले मलाई पढ्न निकै सजिलो भयो। नजानेको सोध्न सक्ने भएँ। खाना पकाउँदै गर्दा मामा र दाइले पढेको सुन्ने गर्थें। त्यही आधारमा २०५१ सालमा प्राविधिक सहायक पदमा जाँच दिएँ, पास भएँ,’ देवकुमारीले आफ्नो विगत विस्तार लगाइन्, ‘दाजुले पढेको तरिका सिकेरै मलाई सरकारी सेवामा आउन सजिलो भयो।’
दाजुबहिनीबीच कहिलेकाहीँ छलफल र विवाद हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दा महेन्द्रले जवाफ दिए, ‘विवाद गर्ने फुर्सद कहाँबाट पाउनु? सबै आफ्नो काममा व्यस्त भइन्छ। म पनि बिहान बेलुकै लोकसेवाको काममा हुन्छु। ऊ पनि कार्यालयमै व्यस्त भएपछि कहिले त आफ्नै मान्छेको शुभकार्यमा समेत जान पाइन्न।’
उनलाई जेठा दाजु महेन्द्रको सबभन्दा मन पर्ने बानी पढ्ने शैली हो। भन्छिन्, ‘दाजुको पढ्ने तरिका गजब छ। उहाँ धेरै पढ्ने, थोरै नोट गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यसलाई सम्झिनुहुन्छ। त्यही मन्त्र मैले पनि सिकेको छु।’
‘पढ्ने भन्दैमा सबथोक छाडेर पढेर हुँदैन। मैले दाजुबाट यही सिकेको हुँ,’ उनले भनिन्, ‘यसले मलाई पनि अहिलेसम्म सफल बनाएको छ।’
देवकुमारीलाई एसएलसी दिने बेला परीक्षा केन्द्र अनगुमन गर्न आएका जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकृत देख्दा पहिलोचोटि अधिकृत हुने चाहना जागेको हो। त्यति बेला ‘जिन्दगीमा सेक्सन अफिसर बन्न पाए कस्तो हुन्छ होला’ भन्ने उनलाई लागेको थियो।
‘त्यसपछि भने मलाई सचिव पनि भइन्छ कि भन्ने लाग्यो,’ उनले भनिन्।
उनी त्यतिबेला मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा निर्देशक थिइन्। भुइँचालोले भत्किएका यस क्षेत्रका विद्यालयहरूमा पढाइ सुरू गराउन आफूले पहल गरेको उनले बताइन्।
‘मैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर ३ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँको सहयोग जुटाएँ। यसले एक महिनामै विद्यालयहरूमा पढाइ सुरू भयो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले अस्थायी टहरा, पानीका धारा बनाउने र विद्यार्थीहरूलाई परामर्श दिने काम गर्यौं। मलाई अहिले पनि त्यो काम निकै सफलतापूर्वक गरेँ जस्तो लाग्छ।’
दुर्गम क्षेत्रमा २३ हजारभन्दा बढी माध्यमिक तहका शिक्षक नभएका बेला नेपाल टेलिभिजनमार्फत् ‘भर्चुअल क्लास’ सुरु गरेको उनले जानकारी दिइन्।
‘सचिव, सहसचिवहरूलाई केही विषयमा छलफल गर्नुपर्यो भने पुरूष साथीहरू बिहान-बेलुकासमेत भेटघाट गर्नुहुन्छ। तर त्यो मौका महिलालाई छैन,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षा मन्त्रालयमा म सहसचिव हुँदा अरू २२ जना सहसचिव हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँहरूसँग बिहान-बेलुकी अनौपचारिक कुराकानी गर्न मिलेन। महिलालाई घरको कामले पनि कार्यालयबाहिर समय कम हुन्छ।’
‘म घर पुग्न ढिला भएँ र उहाँ आइसक्नुभएको रहेछ भने श्रीमती कहिले आएर खाना पकाउला भनेर कुर्नुहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘म थाकेर गएको बेला चिया पकाएर दिनुहुन्छ। म पनि त्यही गर्छु।’
‘महिला मुख्यसचिव कहिले बन्लान् त?’ कुराकानीको बिट मार्दै हामीले देवकुमारीसँग सोध्यौं।
‘यो कुरा म भनिहाल्छु, मलाई सजिलो हुन्छ,’ महेन्द्रले दाजुको भूमिका देखाउँदै आफूभन्दा पाँच वर्ष कान्छी बहिनीलाई बोल्न नदिइकन आफैं अघि सरे, ‘राजनीतिमा प्रधानमन्त्री भनेजस्तै कर्मचारीमा मुख्यसचिव हो। जसले तीन वर्षसम्म कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्छ। मुख्यसचिवले अवकाश पाउँदा जो मुखमा पुगेको छ, उसैले पद पाउँछ। वरिष्ठ तीन सचिवमध्येबाट एक जनालाई ल्याउने हो। महिला नै ल्याउँछु भन्दैमा मिल्दैन।’
उनले अगाडि भने, ‘कतिपय कुरा समय, परिस्थिति र भाग्यको पनि हुन्छ। अहिले नै मुख्यसचिव हुन पाइएला भन्ने होइन। मलाई भाग्यमा विश्वास लाग्छ। जन्मँदा जे ल्याएको छ त्यही हुन्छ होला।’
साभार :सेतोपाटी बाट